China Hastelloy C-276 UNS N010276 ဘား၊ စာရွက် / ပိုက်၊ အနားကွပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Sekonic
Hastelloy ကို C-276 UNS N010276 ဘား / စာရွက် / ပိုက် / အနားကွပ်
ဘုံကုန်သွယ်ရေးအမည်များ: HC-276, UNS N10276, W.Nr. 2,4819, ATI C-276, Nicrofer 5716, hMoW-Alloy C-276, NAS NW276
Hastelloy C-276 အလွိုင်းသည် tungsten ပါဝင်သောနီကယ် - ခရိုမီယမ် - molybdenum အလွိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန်နိမ့်သောဆီလီကွန်ကာဗွန်ပါဝင်မှုကြောင့်စွယ်စုံခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။
Hastelloy C-276 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ဘား / လှံတံ ခွင့်လွှတ်ခြင်း စာရွက် / ပြား ပိုက် / Tube
4. အက်ဆစ်အက်ဆစ်နှင့်အက်စစ်ဓာတ်ပေါင်းဖို; ဆာလ်ဖာအက်ဆစ် condenser ။
ရှေ့သို့ Hastelloy ကို C-22 UNSN06022 BAR / Bolt က / စာရွက် / ပိုက်
နောက်တစ်ခု: Inconel 625 UNS N06625 BAR / စာရွက် / ပိုက် / Bolt
Hastelloy C276 ပိုက်
Hastelloy C276 ပြား
Hastelloy C276 စာရွက်
Hastelloy C276 ချွတ်
ဂဟေဝါယာကြိုး, အလွိုင်း R26 မူလီ, ဂြိုလ်တု 6B, ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, ဂြိုလ်တု 6, ဟေး 25 ဝါယာကြိုး,